Hiiraan Online News About Somalia » Xog: Dhageeyso Magalada Mugdisho oo Hub aruurin xoogan ay ka socoto+Eng Yariisow oo ku baaqay in laga…
Xog: Dhageeyso Magalada Mugdisho oo Hub aruurin xoogan ay ka socoto+Eng Yariisow oo ku baaqay in laga…
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Eng. C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) ayaa ka hadlay howlgalka xasilinta Caasimada Muqdisho ay wadaan ciidamo isku dhaf ah oo katirsan dowlada Soomaaliya.
Waxa uu sheegay Wasiir Yariisow in howlgalka uu si habsami leh uga socdo Muqdisho ayna ciidamada amaanka ku guuleesteen in ay gacanta kusoo dhigaan hub badan oo sharaci daro ah, waxa uuna tilmaamay in ay jiraan dad cabasho ka keenay sida uu howlgalka u socdo.
Eng Yariisow ayaa xusay in howlgalka hub ka dhigista uu soconayo ayna jiri doonin cid loogu aabo yeelaayo, waxa uuna xusay in tilaabo adag oo dharci ah laga qaadayo cidii isku dayda in ay ka hor timaado howlgalka xasilinta amaanka Caasimada ama siyaasadeysa.
”Cid laga yeelayo ma jirto in ay ka hor timaado qorshaha xasilinta amaanka caasimada, dowlada sharciyad ayey u heesataa in ay xasiliso dalka ayna ka shaqeysyo amaanka, ma jirto dad gaar ah oo la beegsanayo mana la yeelayo in qabiil iyo waxaan jirin lagu oyr kacsado oo la siyaasadeeyo howlgalka xasilinta’ Ayuu yiri Wasiir Yariisow.